Apple Products | IPhone News (Pejy 15)
Telo volana taorian'ny nisintahany tamin'ny tsena dia nitombo ny sandan'ny iPod Classic. Satria ny iPods no nametraka ny fironana.
Azonao atao izao ny mandoa amin'ny PayPal ao amin'ny Apple Store sasany amin'ny Internet
Ireo magazay Apple Online dia efa manaiky ny PayPal ho fomba fandoavam-bola hividianana vokatra sy kojakoja Apple ho an'ny iPhone, iPad sy ny hafa.
Apple dia mampiroborobo ny mailaka Messages miaraka amin'ny doka
Ny hafatra am-peo no ivon'ny fampahafantarana momba ny fanambarana Apple vaovao izay ahitana mpisehatra mahatsikaiky roa mampiseho ny vaovaon'ilay fampiharana amin'ny fomba mahatsikaiky
Top 5: vokatra Apple izay tena flop
Na dia fahombiazana aza ny ankamaroan'ny zavatra fantatra momba an'i Apple, dia misy tetikasa maro tavela ao anaty aloka ary tena tsy fahombiazana.
Apple dia manazava ny tolotra omeny ho an'ny Black Friday
Ny antsipirian'ny Apple Black Friday dia manolotra fahazoana karatra fanomezana amin'ny fividianana headphone iPhone, iPad, Mac, iPod na Beats.
Izay rehetra nambaran'i WatchKit taminay momba ny Apple Watch
WatchKit dia nanome fampahalalana marobe momba ny Apple Watch, hoy izahay aminao
Ny tantara tsy mampino momba ny Jobs sy ny prototype voalohany an'ny iPod
Nolavin'i Steve Jobs ny prototype voalohany an'ny iPod, ary nataony izany satria raha ny filazany dia lehibe loatra izany. Mazava ho azy fa nahagaga ny olona rehetra niaina an'io ilay tantara an-tsary tao ambadik'ilay raharaha.
Ahoana ny fampiasana AirDrop hizarana rakitra
Fampianarana hianarana ny fomba fampiasana AirDrop hizarana rakitra eo anelanelan'ny fitaovana Apple, miaraka amin'ny iOS na Mac OS X. Manazava izany tsikelikely izahay
Ireo no valin'ny tatitra isan-taona nataon'i Apple
Ny valiny ara-bola an'i Apple amin'ity taona ity dia navoaka, ary ny vaovao dia tombony ambony, ary koa fanafiana ambony ho an'ny fampiasam-bola.
Ny volavolan'ny Apple Watch amin'ny iPhoneo dia fampiasa fanovana
Ny interface an'ny Apple Watch dia eo amin'ny molotry ny tsirairay, mpamorona iray namorona rindranasa nitahiry izany, androany mitondra tweak izay nandrasan'ny maro isika.
Raha te hampiasa ny solosainao Mac ianao hiantsoana amin'ny alàlan'ny iPhone dia mila kitendry virtoaly tahaka ilay asehonay anao anio ianao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Handoff amin'ny Macs anao taloha miaraka amin'ny fitaovana fampandehanana mitohy
Mba hahafahana mankafy ny Handoff amin'ny fitaovana Mac taloha dia ilaina ny fanovana fitaovana sy ny fametrahana fitaovana toy ny Continuity Activation Tool.
Ahoana ny fametrahana karatra fandoavam-bola ao amin'ny Apple Pay
Amboary ny karatra misy anao ho an'ny fandanianao ao amin'ny Apple Pay, amin'ity fomba ity dia mamonjy fotoana amin'ny fandoavam-bola any amin'ny magazay sy amin'ny Internet ianao.
Fomba vaovao: »swaggers» nivory nanoloana ny Apple Stores, ny fivavahana na ny fampirantiana?
Misy fomba vaovao toa natsangana tao amin'ny Apple Store ao Paseo de Gracia, Barcelona, ​​toerana anaovan'ny vondrona an-tanàn-dehibe mandany ny tolakandro eo am-baravarany.
Lisitry ny banky sy ny orinasa mifanaraka amin'ny Apple Pay
Lisitry ny orinasa, banky ary carte de crédit ary debit mifanaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola Apple Pay
Raha manana carte de crédit US ianao dia afaka mampiasa Apple Pay amin'ny faritany rehetra
Kitiho ny iOS 8.1 hampiorina ny Apple Pay raha tsy mipetraka any Etazonia izahay mba hanampy karatra amerikana ahafahantsika mandoa amin'ny NFC.
Fampisehoana an-tsary ny fomba fandoavam-bola amin'ny Apple Pay ao amin'ny McDonalds
Fampisehoana an-tsary ny fomba fandoavam-bola amin'ny iPhone 6 amin'ny McDonalds amin'ny alàlan'ny Apple Pay ho fomba fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny NFC.
Aiza ny sisim-bidy ao amin'ny iTunes 12?
Mety nahatsikaritra ianao fa nanova zavatra vitsivitsy ny iTunes 12. Anisan'izany, nanjavona ilay sidebar. Androany izahay milaza aminao ny fomba hamerenana azy io.
iOS 8.1 ireo fiasa izay ho tonga amin'ny alatsinainy ho avy izao amin'ny iPhone sy iPad
Famintinana ireo fanatsarana nateraky ny fanavaozana ny iOS 8.1 izay havoakanay ny alatsinainy 20 oktobra ho avy izao.
iTunes 12.0.1 dia azo alaina ao anaty alaina izao
Ny kinova iTunes vaovao, na dia tsy nambaran'ny Apple tamin'ny fomba ofisialy aza, dia azo alaina ao amin'ny Mac OS X sy Windows.
Ahoana ny fanamboarana ny iTunes WiFi syncing amin'ny iOS 8
Taorian'ny fanavaozana ny iOS 8, mpampiasa sasany no nitatitra fa misy olana amin'ny fampifanarahana WiFi eo anelanelan'ny iTunes sy ny iPhone. Eto izahay dia manolotra fomba hamahana izany.
Elaela ny Apple no tsy nanavao ireo vokatra ireo
Apple dia hampiditra ny iPad Air 2 sy ny iPad Mini 3 amin'ny 16 Oktobra fa mety hanavao ny iPod, Mac Mini, Apple TV na ny monitor Thunderbolt Display ihany koa.
Inona no hasehon'i Apple amin'ny 16 Oktobra?
Inona no nomanin'i Apple ho antsika amin'ny faran'ny taona?
Telo taona tsy niasa Steve Jobs
Telo taona lasa izay taorian'ny nahafatesan'i Steve Jobs, taona niova be ny orinasa
Ny fahafinaretana mitsikera an'i Apple
Ny tantara no miverimberina foana, isan-taona: Apple dia mandefa vokatra vaovao (matetika iPhone) ary mivoaka ...
Ny fotoana fiandrasana iPhone 6 Plus dia maharitra 3 na 4 herinandro
Ny fiandrasana terminal dia mety miovaova arakaraka ny maodely sy ny endrika fividianana, ho an'ny iPhone 6 Plus dia mihetsika isika mandritra ny 3-4 herinandro fiandrasana.
Sokafy ny famandrihana ny iPhone 6 sy 6 PLus ao amin'ny Apple Store
Apple dia mamela ny famandrihana iPhone 6 sy iPhone 6 Plus ao amin'ny tranokalany. Fivoarana amin'ny politikam-barotra sy fifaliana ho an'ireo mpampiasa, manome torohevitra vitsivitsy izahay.
Ny safidy hividianana iPhone 6
Ny fividianana iPhone 6 na 6 Plus dia fampiasam-bola matanjaka ara-toekarena izay tsy azontsika odian-tsy hita, eto dia manolotra safidy mifanaraka amin'ny toekarena rehetra aho.
Sintomy ny rohy farany amin'ny iOS 8
Raha tsy azonao atao ny misintona ny kinova farany an'ny iOS 8 avy amin'ny iTunes, satria tototry ny lozisialy Apple dia asehonay anao eto ambany ny rohy fampidinana mivantana mankany amin'ny IPSW
Fifandraisana Bluetooth sy Wifi, lakilen'ny Apple Watch
Ny Apple Watch dia manana fifandraisana WiFi na dia tsy hiditra amin'ny Internet mivantana aza
Afaka mihaino mozika amin'ny Apple Watch ianao raha tsy misy iPhone
Ny Apple Watch dia tsy mila ny iPhone hahafahana mitendry mozika amin'ny alàlan'ny headphones Bluetooth
Ny hevitry ny manam-pahaizana momba ny famantaranandro momba ny Apple Watch
Manam-pahaizana manokana amin'ny famantaranandro no manome ny heviny momba ny Apple Watch, mamakafaka azy ho famantaranandro fa tsy zavatra ara-teknolojia
Apple Watch, zavatra fito momba azy izay mety tsy fantatrao
Tsiambaratelo sy fiasa amin'ny Apple Watch izay tsy nolazaina tao amin'ny keynote famelabelarana ary mety tsy fantatrao ny momba an'i Apple Watch.
Famerenana horonantsary voalohany an'ny iPhone 6 sy Apple Watch
Lahatsary misy ny famakafakana voalohany sy ny hevitra momba ny iPhone 6, iPhone 6 Plus ary ny Apple Watch.
Ireto ny horonan-tsary fampiroboroboana ny iPhone 6 sy Apple Watch
Fanangonana horonantsary mahavariana amin'ny iPhone 6 sy Apple Watch noraketin'i Apple hanehoana aminay ny fahaizan'ny vokatra vaovaon'izy ireo.
Ny Apple Watch dia tsy famantaranandro tsy misy rano
Ny Apple Watch dia tsy rendrika anaty rano ary misy fetrany hafa toa ny fizakan-tenany sy ny fahafaha-manao an-tserasera.
Ny fampahalalana rehetra an'ny Apple Watch
Atorinay anao ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ilay Apple iWatch nandrasana hatry ny ela izay nantsoina ihany hoe Apple Watch
Kairos, ilay famantaranandro tena izy
Ny smartwatch Kairos, famantaranandro hybrid voalohany eny an-tsena, dia fitambarana tonga lafatra eo amin'ny famantaranandro mandeha ho azy sy ny smartwatch
Apple dia hanohy ny fanitarana azy any Moyen Orient ary hahatratra ny Emira Arabo Mitambatra, ny tanànan'i Dubai no hampiantrano ny Apple Store lehibe indrindra eto an-tany.
Azo alaina ao anaty iTunes 11.3.1: ireto no vaovao
Androany dia nahita fanavaozam-baovao iTunes 11.3.1 vaovao azo alaina ho an'ny Mac sy Windows izahay, izay hianarantsika ireo zava-baovao vaoavao miaraka aminy.
CronicUnlocks dia nanambara serivisy vaovao izay anomezany antsika ny mety hanesorana ny hidy fanidiana ho takalon'ny $ 149,99.
Apple dia manitatra ny fe-potoana farany ambony hatramin'ny 60 andro mba hifanarahana amin'ny AppleCare
Apple dia nanitatra ny fe-potoana hahafahana manao fifanarahana serivisy fiantohana maharitra maharitra hatramin'ny 60 andro.
Inona no hitranga amin'ny iPod Touch?
Inona no hitranga amin'ny iPod Touch? Apple dia namerina nanamboatra an-tsakany sy an-davany ity faritra ity tamin'ity herinandro ity tamin'ny modely mora vidy kokoa, fa inona kosa no ho an'ny mpilalao?
Ahoana ny fanovana ny fanontaniana momba ny fiarovana ID Apple anao
Ampianarinay anao ny fomba fanovana ireo fanontaniana sy valiny ao amin'ny kaonty Apple, izany hoe ny Apple ID.
Ity no fotoana tsara indrindra hividianana ny anjaran'ny Apple
Ity no fotoana tsara indrindra hividianana ny anjaran'ny Apple noho ny fizaran'i Apple ny vidin'ny anjarany ho faritra 7 ny vidiny dia mora lavitra
Apple dia te-hanamarina ny iWatch avy amin'ny FDA
Ny tatitra farany dia milaza fa ny iWatch dia miandry ny fankatoavana avy amin'ny FDA, izay ny vatana amerikana avaratra izay misahana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana.
Apple TV faharoa-gen lany ny fanohanana iOS 8
Apple dia namoaka rindrambaiko mpamorona Apple TV 7 beta 1 izay mamela Apple TV tsy manohana azy, manohana ny maodely ankehitriny fotsiny.
Araka ny tatitra farany, iOS 8 dia hamela anay hanao antso anaty vondrona misy eo amin'ireo mpampiasa marobe amin'ny fampiharana FaceTime teratany.
Apple mandefa programa fanoloana charger iPhone
Vao avy nandefa programa fanoloana ny charger iPhone 5W i Apple, maodely iray izay natolotra tamin'ny maodelin'ny iPhone 3GS, iPhone 4 ary iPhone 4s.
Antony 7 tsy tokony apetrakao amin'ny iOS 8 Beta
Avy amin'ny iPad News dia manome anao antony fito tsy tokony hametrahana ny iOS 8 beta izahay.
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 8 an'ny Apple (I) vaovao
Avy amin'ny Actualidad iPad izahay dia mampiseho aminao ny vaovao rehetra natolotr'i Apple momba ny iOS 8 vaovao izay hisolo ny iOS 7 ankehitriny amin'ny fararano manaraka.
Apple dia nanolotra tao amin'ny WWDC ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny Mac: OS X Yosemite, izay manakaiky ny endrika minimalista an'ny iOS 8
Araho ny WWDC 2014 miaraka amin'ny fampisehoana ny iOS 8 mivantana amin'ny iPad News
Araho amin'ny Actualidad iPad ny fampisehoana ny iOS 8, OS X 10.10 ary ny vaovao rehetra an'ny WWDC 2014 mivantana avy amin'ny bilaoginay sy ny tambajotran-tseraseranay.
Raha te hizara ny atin'ny iPad amin'ny fahitalavitra ao amin'ny efitranokay izahay ary manana Apple TV, dia afaka mampiasa ny fampiharana iMediaShare
Apple dia mahatsapa ny olana amin'ny hafatra an-tsoratra
Adam Pash dia nitatitra fa niaiky olana iray i Apple: navadika ho iMessage ny hafatra an-tsoratra dia alefa amin'ny Apple ID avy eo
Ny Apple Store dia mitana ny laharana faharoa amin'ny varotra amin'ny Internet aorian'ny Amazon
Apple Store an-tserasera Apple dia nahatratra ny laharana faharoa amin'ny haben'ny varotra amin'ny Internet, nahatratra an'i Staples ary tao ambadik'i Amazon ihany.
Betsaka ny mpampiasa Apple TV amin'ny taranaka voalohany no tsy afaka miditra amin'ny iTunes Store
Mpampiasa Apple TV amin'ny taranaka voalohany no nitaraina fa tsy afaka niditra tao amin'ny iTunes Store nandritra ny telo andro mahery.
Apple Store voalohany any Torkia no nisokatra ny 5 aprily tao Istanbul
Apple Store iray hafa eran'izao tontolo izao izay manokatra ny varavarany. Amin'ity indray mitoraka ity dia ao Istanbul izy io, ka io no fivarotana ara-batana voalohany an'ny orinasa eto amin'ity firenena ity.
Ny Fikambananan'ny Watchmen Swiss dia mandà tsy hiara-miasa amin'i Apple sy iWatch
Apple dia niezaka tamim-pahombiazana nangalatra tamin'ireo mpiasa marika Hublot, ary koa ireo mpanamboatra hafa izay manampahaizana manokana amin'ny faritra famantaranandro lafo vidy ho an'ny iWatch.
Vaovao lehibe ho an'ny Apple TV no andrasana amin'ny fampisehoana manaraka. Saingy androany isika dia manana hevitra momba ny fanaraha-maso lavitra miaraka amin'ny asan'ny lalao.
Motorola dia manolotra ny smartwatch, ny Moto 360
Motorola dia namoaka ny Moto 360, ilay smartwatch hifaninana amin'ny iWatch an'i Apple
Ny iPhone 6 dia mety ahitana sensor hafanana, tsindry ary hamandoana
Ny iPhone 6 dia misy andian-tsarimihetsika handrefesana ny mari-pana, ny tsindry ary ny hamandoan'ny tontolo iainana, hoy ny fanadihadiana nataon'ny mpandalina sinoa iray androany.
Ny Apple Store Puerta del Sol any Madrid ho avy dia manala sarona ny endrika
Mahitsy farany hisokafan'ny Puerta del Sol Apple Store, farafaharatsiny, izany no antenainay aorian'ny fahitana ny endrika namboarina aorian'ny roa taona
Ny rafitra fiarovana "fanamarinana dingana roa" an'ny Apple dia misy any Espana izao. Azavainay hoe inona izany ary ahoana ny fomba handrindrana azy.
iPod: orinasa efa nihena efa ela hoy i Cook
Ny fanolorana ny angon-drakitra fivarotana isan-taona an'ny Apple dia tsy niraharaha ireo izay an'ny iPod indrindra satria very toerana ny mpilalao.
Apple pitsopitsony, hello
Anisan'ireo fanomezam-boninahitra azy ireo ny fahatsiarovan'izy ireo ireo izay namolavola sy nanisy fiovana tamin'ny Mac typeface ary niarahaba ireo lanyard
Seas0nPass azo alaina ao amin'ny Jailbreak Apple TV 2 misy sonia 5.3
Hita izao ny Seas0nPass 2.4, fitaovana iray miadidy ny Jailbreak ny Apple TV taranaka faharoa miaraka amin'ny sonia 5.3 (6.4.1) napetraka.
Apple rehetra, ny gazetinay momba ny iPhone, iPad ary Mac amin'ny Flipboard
Nanomboka magazine vaovao momba ny tontolon'ny Apple izahay, maimaimpoana ary misy amin'ny iPhones sy iPads anao.
Ny Stores Apple dia mifanaraka amin'ny vidin'ny fivarotana ara-batana hafa
Apple Store dia mifanaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana. Politika kely fantatra izy io fa afaka manome antoka antsika ny fihenam-bidy kely raha haintsika ny mampiasa azy ireo.
Paypal dia manolotra ny fahafaha-mividy karatra fanomezana iTunes
Paypal dia mandefa ny magazay fanomezana nomerika azy ary ny mpiara-miasa voalohany aminy dia Apple manolotra orinasa izay mety hivarotra karatra fanomezana iTunes.
Hatramin'ity herinandro ity dia nanova ny fepetra takiana i Apple mba hahafahana manatitra ny fitaovanao taloha mba hahazo fihenam-bidy hividy aminao ...
Fivarotana Apple ao Granada?
Raha ny angom-baovao azo avy amin'ny bilaogy Emilcar, Granada, ny faritany Andalosiana dia mety hanana fivarotana Apple ara-batana, ilay antsoina hoe Apple ...
Ahoana ny fomba hidirana haingana amin'ny manager multitasking
Safidy haingana hidirana amin'ny multitasking iOS dia ny swipe up amin'ny rantsantanana efatra na dimy amin'ny efijery iPAd fa tsy hampiasa Home.
Apple Stores dia hampiasa iBeacon hanatsarana ny serivisy sy ny varotra
Ny iBeacon dia iray amin'ireo zava-baovao ateraky ny rafitra iOS7 ary mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny varotra, satria ...
Apple TV dia havaozina amin'ny kinova 6.0.1
Apple TV dia nahazo fanavaozana rindrambaiko ho an'ny kinova 6.0.1, izay mitondra fanatsarana ny fahombiazana amin'ny ankapobeny.
Vao nohavaozina tamin'ny vaovao manan-danja ho an'ny mpampiasa iDevices i Netflix, azonao atao izao ny mampiasa AirPlay hijerena ny atiny amin'ny fahitalavitra
Apple dia nanisy antsipiriany tamin'ny alàlan'ny antontan-taratasy iray momba ny fikirakirana ny Apple TV amin'ny fampiasana fitaovana iray izay nametraka ny iOS 7 sy ny bluetooth mora foana.
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 7
Ny fanolorana ireo maodely iPhone vaovao, ny 5c sy ny 5s, dia nanjary dingana iray hanamboarana tanteraka ny interface an'ny iOS 7.
Afaka misintona iTunes 11.1 izao ianao
iTunes 11.1 dia azo sintonina avy amin'ny tranokala Apple. Ilaina ity iTunes vaovao ity hampifanarahana ny fitaovana misy antsika amin'ny iOS 7.
Apple dia afaka namela nisintona kinova taloha tamin'ny App Store
Apple dia mamela ny fampiharana kinova taloha hapetraka ao amin'ny App Store mba hahafahan'ireo fitaovana manana kinova iOS efa lany daty mankafy azy ireo
Tariby mitondra taratra 2 metatra vaovao
Apple dia mandefa ny kinova 2 metatra an'ny tariby mifehy sy mampifandray ny Lightning amin'ny 29 euro.
Mendrika ny mandeha amin'ny iPhone 5 ka hatramin'ny iPhone 5S?
Lazainay aminao raha toa ka ilaina ny mifamadika amin'ilay iPhone 5S vaovao raha efa manana iPhone 5 ianao
Ny iPod Classic dia voalaza fa ho faty amin'ity taona ity ... indray
Maneho hevitra ny haino aman-jery fa hijanona tsy hamidy intsony ny maodely iPod Classic aorian'ny tsaho efa an-taona maro, tsy manana teknolojia mandroso intsony izy io raha oharina amin'ny iPhone.
Manomboka indray ny fanamboarana Apple Apple Store
Ny orinasa Cupertino dia namerina ny tetik'asa hananganana Apple Store ao an-tanànan'i Brisbane, tetikasa iray izay efa noheverina fa nofoanana.
Ny orinasam-paoma dia nanapa-kevitra ny hanangana Apple Store vaovao ao amin'ny tanàna manan-danja indrindra ho azy ireo, San Francisco.
Tombanombanana momba ny mety ho endrik'i Apple iPhone 5C
Ahoana ny fomba hijerena sarimihetsika Google Play amin'ny fitaovan'ny iOS anao
Ny fijerena sarimihetsika Google Play amin'ny iPad sy iPhone dia tena tsotra, hazavainay amin'ny antsipiriany ny fomba fanaovana azy.
Yoigo dia manatevin-daharana ny lisitry ny mpandraharaha izay afaka mividy iPhone amin'ny alàlan'ny Apple Store ara-batana.
Izany no mety ho endrik'i iOS 7 amin'ny iPod Nano taloha
Apple dia manolotra ny iOS 7 vaovao: nohavaozina sy miaraka amina asa vaovao
Apple amin'ity indray mitoraka ity. Ny iOS 7 vaovao dia tsy mitovy. Averinay jerena ireo toetra mampiavaka azy indrindra.
Ity no masinina ampiasain'izy ireo ao amin'ny Apple Store hanoloana ny efijery iPhone
Sarin'ny masinina ampiasaina ao amin'ny Apple Store hanoloana sy hampanjariana ny efijery iPhone amin'izao fotoana izao.
IFixit dia manala ny iPod Touch 5G 16GB
Ny iFixit dia nanala ny iPod Touch 5G 16GB hanamarinana raha toa ka tsy mitovy amin'ny kinova 32GB sy 64GB ny fitaovana.
Lahatsary ahitantsika ny iPod Touch 5G 16GB
Ny vidin'ny iPod Touch an'ny taranaka fahadimy miaraka amin'ny fitehirizana 16GB izay mandefa ihany koa ny fakantsary aoriana, ho setriny, dia 249 euro ihany no vidiny.
Apple dia mandefa iPod Touch 5G 16GB tsy misy fakan-tsary any aoriana
Apple dia nanomboka nivarotra maodely 5GB iPod Touch 16G tsy misy fakan-tsary any aoriana ao amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny vidiny 249 euro.